Google Pixel2ဖုန်းမှာ RAM 6GB, Snapdragon 835 ပရော်ဆက်ဆာနှင့် 4K Display တို့ ပါဝင်လာဖွယ်ရှိ
8 Mar 2017 . 3:48 PM
ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ထွက်ရှိလာမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ Android ပလက်ဖောင်းက စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Google Pixel2ဖုန်းမှာ ပါဝင်လာမယ့် အချက်အလက်တွေကတော့ ပေါက်ကြားလာခဲ့ပါပြီ။ ၂၀၁၆ တုန်းက Google Pixel ဖုန်းဟာ Android ထဲမှာ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်ခဲ့သလိုပဲ ထပ်ပြီးထွက်ရှိမယ့် Pixel2ဖုန်းဟာလည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေနဲ့ နောင်တော်ရဲ့ ခြေရာကို နင်းနိုင်ချေရှိနေတာပါ။
တန်ဖိုးကြီးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ ဖုန်းအစိတ်အပိုင်းတွေကတော့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲ သုံးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် Sony Xperia XZ မှာ အသုံးပြုထားပြီး Samsung ရဲ့ Galaxy S8 မှာလည်း သုံးနိုင်ချေရှိတဲ့ Snapdragon 835 ပရော်ဆက်ဆာကိုလည်း Pixel2ဖုန်းမှာ အသုံးပြုလာဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ RAM 6GB နဲ့တွဲဖက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်အားနှုန်းတော်တော်လေးမြန်လာမှာပါ။
ဒီဖုန်းရဲ့ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အားအပြည့်သွင်းပေးနိုင်မယ့် Quick Charge 4.0 နည်းပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် ထွက်ရှိထားတဲ့ ဖုန်းတွေမှာQuick Charge 3.0 နည်းပညာကိုပဲ အသုံးပြုမှုများပြားနေပါသေးတယ်။ Display အနေနဲ့လည်း Sony ရဲ့ Xperia XZ မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ 4K display ကို Pixel2မှာ မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိနေတာပါ။
Google Pixel2အတွက်တော့ Android 8.0 ( Android Oreo လား ? Orbit Gum လား ? Oatmeal cookie လား ? Opal Fruit လား ? မသဲကွဲသေးပါဘူး ) ကို ပထမဆုံးအနေနဲ့ အသုံးပြုလာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ Pixel2ဟာ နောက်ပိုင်းတန်ဖိုးကြီးဖုန်းတွေတိုင်းမှာ ပါဝင်လာတဲ့ ရေစိမ်ခံနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကိုလည်း ထည့်သွင်းလာမှာဖြစ်ပြီး Storage အနေနဲ့လည်း 32 GB ကနေစတင်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။ Pixel ဖုန်းထက်တော့ ဈေးအနည်းငယ်သက်သာသွားမယ်လို့ သိရပြီး စတာလင်ပေါင် ၅၀၀ က ကြမ်းခင်းဈေးဖြစ်လာဖွယ်ရှိနေတာပါ။
Google အနေနဲ့ ထွက်ရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ Pixel ဖုန်းမှာလိုမျိုး task အနည်းငယ်များလာတဲ့အခါ ဖုန်းပူတတ်တဲ့ ပြဿနာကို ဦးစားပေးအနေနဲ့လည်း ပြင်ဆင်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ Pixel2ကတော့ ပရော်ဆက်ဆာကောင်းကောင်းကို အသုံးပြုထားတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း တန်ဖိုးကြီးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တာနဲ့အညီ ဖုန်းပူတာမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ ဆော့ဖ်ဝဲပိုင်းကို သေချာပြုလုပ်ထားသင့်ပါသေးတယ်။ Google အနေနဲ့ Pixel ဖုန်းကို ပိုမိုအောင်မြင်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Customer Feedback တွေကို ဂရုစိုက်ပြီး ထုတ်လုပ်သင့်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
Ref : Trusted Review
Google Pixel2ဖုနျးမှာ RAM 6GB, Snapdragon 835 ပရျောဆကျဆာနှငျ့ 4K Display တို့ ပါဝငျလာဖှယျရှိ
ဒီနှဈကုနျပိုငျးလောကျမှာ ထှကျရှိလာမယျလို့ သတငျးတှထှေကျနတေဲ့ Android ပလကျဖောငျးက စှမျးဆောငျရညျမွငျ့ Google Pixel2ဖုနျးမှာ ပါဝငျလာမယျ့ အခကျြအလကျတှကေတော့ ခနျ့မှနျးခွေ ပေါကျကွားလာခဲ့ပါပွီ။ ၂၀၁၆ တုနျးက Google Pixel ဖုနျးဟာ Android ထဲမှာ ဆရာတဈဆူဖွဈခဲ့သလိုပဲ ထပျပွီးထှကျရှိမယျ့ Pixel2ဖုနျးဟာလညျး စှမျးဆောငျရညျကောငျးတှနေဲ့ နောငျတျောရဲ့ ခွရောကို နငျးနိုငျခရြှေိနတောပါ။
တနျဖိုးကွီးဖုနျးတဈလုံးဖွဈတဲ့အတိုငျးပဲ ဖုနျးအစိတျအပိုငျးတှကေတော့ စှမျးဆောငျရညျမွငျ့တဲ့ပစ်စညျးတှကေိုပဲ သုံးလာမှာဖွဈပါတယျ။ လောလောဆယျ Sony Xperia XZ မှာ အသုံးပွုထားပွီး Samsung ရဲ့ Galaxy S8 မှာလညျး သုံးနိုငျခရြှေိတဲ့ Snapdragon 835 ပရျောဆကျဆာကိုလညျး Pixel2ဖုနျးမှာ အသုံးပွုလာဖှယျရှိနပေါတယျ။ RAM 6GB နဲ့တှဲဖကျလိုကျမယျဆိုရငျတော့ လုပျအားနှုနျးတျောတျောလေးမွနျလာမှာပါ။
ဒီဖုနျးရဲ့ နောကျထပျစိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့အခကျြကတော့ မိနဈပိုငျးအတှငျး အားအပွညျ့သှငျးပေးနိုငျမယျ့ Quick Charge 4.0 နညျးပညာပဲဖွဈပါတယျ။ လောလောဆယျ ထှကျရှိထားတဲ့ ဖုနျးတှမှောQuick Charge 3.0 နညျးပညာကိုပဲ အသုံးပွုမှုမြားပွားနပေါသေးတယျ။ Display အနနေဲ့လညျး Sony ရဲ့ Xperia XZ မှာ အသုံးပွုထားတဲ့ 4K display ကို Pixel2မှာ မွငျတှရေ့ဖှယျရှိနတောပါ။
Google Pixel2အတှကျတော့ Android 8.0 ( Android Oreo လား ? Orbit Gum လား ? Oatmeal cookie လား ? Opal Fruit လား ? မသဲကှဲသေးပါဘူး ) ကို ပထမဆုံးအနနေဲ့ အသုံးပွုလာမှာဖွဈတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ Pixel2ဟာ နောကျပိုငျးတနျဖိုးကွီးဖုနျးတှတေိုငျးမှာ ပါဝငျလာတဲ့ ရစေိမျခံနိုငျတဲ့ စှမျးရညျကိုလညျး ထညျ့သှငျးလာမှာဖွဈပွီး Storage အနနေဲ့လညျး 32 GB ကနစေတငျလာမယျလို့သိရပါတယျ။ Pixel ဖုနျးထကျတော့ ဈေးအနညျးငယျသကျသာသှားမယျလို့ သိရပွီး စတာလငျပေါငျ ၅၀၀ က ကွမျးခငျးဈေးဖွဈလာဖှယျရှိနတောပါ။
Google အနနေဲ့ ထှကျရှိထားပွီးဖွဈတဲ့ Pixel ဖုနျးမှာလိုမြိုး task အနညျးငယျမြားလာတဲ့အခါ ဖုနျးပူတတျတဲ့ ပွဿနာကို ဦးစားပေးအနနေဲ့လညျး ပွငျဆငျသငျ့တယျထငျပါတယျ။ Pixel2ကတော့ ပရျောဆကျဆာကောငျးကောငျးကို အသုံးပွုထားတယျဆိုပမေယျ့လညျး တနျဖိုးကွီးဖုနျးတဈလုံးဖွဈတာနဲ့အညီ ဖုနျးပူတာမြိုးမဖွဈအောငျတော့ ဆော့ဖျဝဲပိုငျးကို သခြောပွုလုပျထားသငျ့ပါသေးတယျ။ Google အနနေဲ့ Pixel ဖုနျးကို ပိုမိုအောငျမွငျစခေငျြတယျဆိုရငျတော့ Customer Feedback တှကေို ဂရုစိုကျပွီး ထုတျလုပျသငျ့တယျလို့ မွငျမိပါတယျ။